Zinger Bingo ဆန်းစစ်ခြင်း ဇွန်လ 2022 | Bingo77 Myanmar (Burma)
Zinger Bingo ဆန်းစစ်ခြင်း
ပိုင်ဆိုင်သူ: 888 Holdings
ကျွန်တော်တို့ရဲ့Bingoက်ဘ်ဆိုက်များ '' အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စနစ်အရသိရသည် Zinger Bingoအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကောင်းBingo site ကိုအတိုင်းဤ rated ပါပြီ။ သင်ဤ site ပေါ်တွင်ဆော့ကစားရန်ရွေးချယ်လျှင်သင်ဖွယ်ရှိအပြုသဘောဆောင်သောအတွေ့အကြုံရှိသည်လိမ့်မယ်အဓိပ်ပာယျ။ ကောင်းအဖြစ် Zinger Bingoအထိမ်းအမှတ်ကျနော်တို့လစဉ် site ကိုဧည့်သည်များ၏အရေအတွက်သည်တစ်ဦးလိုင်စင်အခွင့်အာဏာရဲ့ဂုဏ်သတင်းဆန်းစစ်နှင့်၎င်း၏ဆုကြေးငွေ '' မူဝါဒပြန်လည်သုံးသပ်ပါပြီ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသေးစိတ်နည်းနည်းထွက်ရှာပါနှင့်ဤအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံသွားရောက်လည်ပတ်တန်ဖိုးရှိသို့မဟုတ်မရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်။
Zinger Bingo 2012 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိတွင် 888 Holdings က PLC ကပိုင်ဆိုင်သည် ။ ဒါဟာကော်မရှင်နှင့်ဂျီဘရောလ်လောင်းကစားကော်မရှင်နာလောင်းကစားဗြိတိန်ကထုတ်ပေးသည်လိုင်စင်အောက်မှာလည်ပတ် - နှစ်ဦးစလုံးဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့လိုင်စင်အာဏာပိုင်များဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ site ကို7အဆင်သင့်-to-ကစားBingoခန်းနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုအချို့သီးသန့်Bingoဂိမ်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါ site ရဲ့အဓိကသင်သည်ဘာသာစကား English ဖြစ်ပါတယ်နှင့်မျှမကအခြားရွေးချယ်စရာရရှိနိုင်ပါသည်။ Zinger Bingo ကောင်းစွာအဖြစ် PayPal က ထုတ်ယူအနည်းငယ်သည်အခြားဆုတ်ခွာနည်းလမ်းများခွင့်ပြုပါတယ်။ နိုင်ငံအတော်များများထံမှကစားသမား Zinger BingoမှာBingoရယူနိုငျပါသညျ။ အဆိုပါ site ကိုတစ်တုံ့ပြန်မှုမိုဘိုင်းဒီဇိုင်းရှိပါတယ်။
ဘင်ဂိုကစားလက်မှတ်တွေ & 10 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
0808 238 9814 (ဗြိတိန်ကနေကစားသမားများအတွက်)
ရယူပါ 18+. T&C ကလျှောက်ထား
ဆုကြေးငွေများနှင့် Withdrawal ပေါ်လစီအပါအဝင် site ရဲ့အရေးကြီးသောမူဝါဒများ, Zinger Bingo, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၏ရှိရေးနေကြသည်။ အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးဖို့အတွက်သင့်ကိုဖုန်းနှင့်အတူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြဖို့တောင်းပါလိမ့်မည်လည်းတစ်ဦးရဲ့အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်း upload တင်ဖို့တောင်းနိုင်ပါသည်။ ဒီ site နှင့်၎င်း၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့အရင်ကဆိုရင်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အွန်လိုင်းBingoကစားသမားများအတွက်နှစ်ဦးစလုံး Zinger Bingoအကြံပြုပါသည်။ ဒါကကောငျးအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံနှင့်သင်အများဆုံးဖွယ်ရှိပေါ်မှာလောင်းကစားကနေအပြုသဘောဆောင်သောအတွေ့အကြုံရှိသည်လိမ့်မယ်။
ကောင်းသောကစားသမား '' ထောက်ခံမှု system ကို
အနှေးချက်တင်ထောက်ခံမှု system ကို
18+. T&C ကလျှောက်ထား
Bingo77 ကို ဖောလိုးလုပ်မည်
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: 18+ သာ။ Bingo77MM.com မှာအားလုံးကမ်းလှမ်းမှုသာသိကောင်းစရာများရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ပြဇာတ်မစတင်မီသက်ဆိုင်ရာဝက်ဘ်ဆိုက်များမှာဘင်ဂိုကစားဆုကြေးငွေ & ပရိုမိုးရှင်းကန့်သတ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးလတ်တလောဒေတာကို Double-စစ်ဆေးပါ။ , တာဝန်သိအလောင်းအစားပေးပါ။ ပိုက်ဆံအဘို့ကစားအန္တရာယ်ကပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းစဉ်းစားပါ။ Bingo77MM.com ဂိမ်းများကို '' ရလဒ်များကိုသို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးအမြတ်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်အာမခံချက်ပေးမထားဘူး။ တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမှ links: Bingo77MM.com ဒီဆိုက်များပေါ်မှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမဆို content များအတွက်တာဝန်ရှိမဟုတ်ပါဘူး။